तीन दिनसम्म बेहुला बेहुली ट्वाइलेट जान नपाउने, बिहेको कस्ताे विचित्र परम्परा ? – Jagaran Nepal
तीन दिनसम्म बेहुला बेहुली ट्वाइलेट जान नपाउने, बिहेको कस्ताे विचित्र परम्परा ?
हरेक धर्म, समुदाय तथा मुलुकमा विवाहका आ आफ्नै रितिरिवाज तथा परम्पराहरु छन् । हाम्रो देशमा पनि विभिन्न समुदायमा अनेक खालका बिहे संस्कारहरु रहेको पाइन्छ ।
जसमा छोरीलाई चिउरीको बोट दाइजो दिनेदेखि, सम्धी लडाइँ गर्ने र छोरीलाई विषयको प्याला दिनेसम्मका । उता इण्डोनेसियामा पनि योभन्दा झनै अनौठो बिहे संस्कार छ । त्यहाँको एक समुदायमा बिहे गरेको तीन दिनसम्म नवविवाहित बेहुला बेहुलीलाई शौचालय जान प्रतिबन्ध लगाइन्छ ।
हो, इण्डोनेसियाको टिडंग समुदायमा यस्तो अनौठो परम्परा छ । यो परम्पराका विषयमा उक्त समुदायमा विभिन्न आस्था तथा मान्यताहरु छन् । त्यसैले उनीहरु यसलाई निकै महत्वपूर्ण मानेर पूर्णरुपमा पालना गर्दछन् ।
यो परम्पराका पछाडिको अर्को कारण चाहिँ नवविवाहित जोडीलाई खराब नजरबाट बँचाउनु हो रे । उक्त समुदायमा के मान्यता छ भने मलमुत्र त्याग गर्ने ठाउँ अर्थात् ट्वाइलेट दुर्गन्धित हुने हुनाले त्यहाँ नकारात्मक शक्तिहरु हुन्छन् ।
यदि बिहे लगत्तै बेहुला बेहुली ट्वाइलेट गएमा उनीहरुमाथि नकारात्मकताको प्रभाव पर्न सक्दछ । त्यसले उनीहरुको दाम्पत्य जीवनमा समस्या ल्याउन सक्दछ र सम्बन्धमै फाटो आएर दाम्पत्य जीवन नै टुट्न सक्दछ भन्ने मान्यता सो समुदायमा रहेको छ ।